नेपालीहरुको राजधानीमा घर हुनैपर्ने, भाडामा बस्छु भन्न लाज लाग्ने रहेछ : ओली
काठमाडौं : नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिठो बोलीमार्फत् किसानलाई मल उपलब्ध गराउने बताए पनि त्यो पूरा नगरेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले...
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले कमरेड भन्नुमा आपत्ति गर्नु नपर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा मालेका पोलिट ब्यूरो सदस्य रहेका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै...
माओवादी विघटनको तयारीमा प्रचण्ड !
काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी विघटन गर्न खप्पिस छन् । उनले पार्टी विघटन गरेर एकपछि अर्को छलाङ पनि मारेका छन् । प्रारम्भमा प्रचण्ड मसालमा थिए । उनले मसालमा विद्रोह गरेर युवावस्थामै...
जनता समाजवादीसँगको सहकार्य सकियो, अब बाँकी जीवन सुशासन, समृद्धि र समाजवाद यात्रामा लाग्नेछु : बाबुराम
काठमाडौं १८ असार । जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको सहकार्य सकिएको बताएका छन् । शनिबार बिहान गोरखा–काठमाडौँ सम्पर्क संयन्त्रको तेस्रो भेला तथा प्रशिक्षण...
१८ असार, काठमाडौं । नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानमा आवद्ध चार दलले संयोजक वामदेव गौतमलाई निष्कासन गरेको छ । अभियानमा आवद्ध समाजवादी केन्द्र नेपाल, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा (राष्ट्रवादी), आम नेपाली पार्टीका...